Qudbadii Dardaaranka Madaxweynaha iyo Dhaarinta Xildhibanada (Sawiro -Dhageyso)
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa qudbadi ugu horeeysay u jeediyey baarlamaanka cusub.
Sheekh Shariif ayaa ugu hambalyeeyey xubnaha baarlamaanka in ay noqdaan xildhibaanadi ugu horeeyey ee Dowlada Federaalka Soomaaliya, isaga oo u mahad celiyey dhamaan dadki kasoo qeybgalay soo diyaarinta baarlamaanka.
Sheekh Shariif ayaa sheegay in hada la joogo waqtigi ay dowladiisu sugeysay, waxa uu ka codsaday shacabka iyo xildhibaanada in ay u nuglaadaan sharciga si dowlada cusub ay u noqoto mid sharciga dhowrto.
“Waxaan joognaa maalinti aan u soconay, hal sano waxaa laga shaqeynayey in aan halkaan imaano, maanta waxaan ku guuleysanay in aan baarlamaan dhaarino iyo in aan gudoomiye kumeel ah helno, beri waxaa bilaabanaya kulanki labaad ee baarlamaanka, dowlada in ay kumeel gaar ka baxdo waa wax aan aad u dooneynay waana gaarnay, xildhibaanada waxaan ka codsanayaa in kuligeen aan u nuglaano sharciga si ay inoogu dhalato dowlad sharciga dhowrto,” ayuu yiri.
Dhageyso Qudbadii Dardaaranka oo dhan
Waxaa goor dhaw la dhaariyey xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya.
Munaasabad ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah Adan Cade ayaa lagu dhaariyey 225 xildhibaan kuwaasi oo noqday talaabadi ugu horeysay oo ay Dowlada Federaalka Soomaaliya qaado.
Dowlada cusub oo ay hordhac u noqdeen xildhibaanada ayaa waxaa xaadir ku ahaa munaasabada madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Shariif Sheekh Axmed, iyo saraakiil ka socotay beesha caalamka oo uu ugu horeeyo Mahiga.
Kulan ay isla caawa ku yeesheen goobta lagu dhaariyey ayey xildhibaanada gudoomiye kumeel gaar ah ugu magacaabeen Jan. Muse Xasan Cabdullle.
Gudoomiyaha Maxkamada sare Caydiid Ilkaxanaf ayaa goobta uga dhawaaqay in gudoomiyhaa baarlamaanka la dooran doono 26-ka bishaan August si kadibna loo doorto madaxweynaha cusub.
Dhageyso Qeybtii kowaa ee dhaarinta Xildhibaanada iyo
Dhageyso Qeybtii 2aad ee dhaarinta Xildhibaanada Xafiiska Wararka Midnimo, webmaster@midnimo.com
Xigasho Raadiyo Muqdisho